Ololaha Qaad Diid ee Muqdisho oo Galay Usbuucii 4aad Iyo Bulshada oo Si Diirran Usoo Dhaweysay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Ololaha Qaad Diid ee Muqdisho oo Galay Usbuucii 4aad Iyo Bulshada oo...
Ololaha Qaad Diid ee Muqdisho oo Galay Usbuucii 4aad Iyo Bulshada oo Si Diirran Usoo Dhaweysay
Muqdisho (XT): Ololaha la dagaallanka Qaadka oo uu Abuukar Jaamac Cawaale (Qaad Diid) ka wado magaalada Muqdisho ayaa galay usbuucii 4aad iyada oo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay si wanaagsan usoo dhaweeyeen ka qeyb qaadashada qaabkii lagu ciribtiri lahaa cunista Qaadka.
Abuukar ayaa hadallo ka jeediyay Jaamacadaha, xaruumaha warbaahinta, xarumaha cilmi baarista iyo shirarka arrimaha bulshada isaga oo ka codsaday bulshada Soomaaliyeed in ay meel uga soo wada jeesato caleentan cagaaran oo uu ku sifeeyay ‘mid lagu guranayo maalka umadda Soomaaliyeed’.
“Markii aan ka joojinnay Qaadkii Ingiriiska, Kenya waxa ay bilowday in ay korshiso xaddiga Qaadka ee dalka Soomaaliya la keeno. Waxaa dadkeenna heysto gumeysi dahsoon oo casri ah. Waan wadeynaa ololahan ilaa aan ka joojino dalkeenna.” Ayuu yiri Cawaale oo ardey 600 kor u dhaafeysa kula hadlayay hoolka Dugsiga Sare ee Hayaan ee Degmada Hawlwadaag.
Mar la waydiiyay waxa laga yeelayo qoysaska ku nool ka ganacsiga Qaadka ayaa waxa uu carrabka ku adkeeyay in ay sameynayaan barnaamij hooyada Qaadka iibisa ay ku badaleyso Qudaar oo ay ganacsato Soomaaliyeed ka qeyb qaadanayaan.
Inta aan hawshaas la bilaabin ayaa waxa uu sheegay Gudoomiyaha La Dagaallanka Qaadka in loo baahanyahay in kabarrada dhex yaalla gudaha caasimadda iyo dukaamada Qaadka lagu iibiyo laga dhex saaro oo meelo cayiman la geeyo. Cawaale oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Qaadka waa in xerooyin gaar ah loo sameeya. Waa in canshuurta lagu kordhiyaa. Waana in la diiwaangeliyaa hooyooyinka ka ganacsada si hadhaw aan mid mid uga soo saarno. Waa in la takooraa dadka Qaadka cuna si ay isaga daayaan. Barnaamijka aan ugu magacdaray hooyo qaadka jooji oo qudaarta iibi waxaan ula jeednaa in hooyada dooneysa in ay ka tanaasusho ka ganacsiga Qaadka laga caawiyo in miis loo sameeyo, kadibna lagu mataaneeyo huteel macaamiil joogta ah u noqda. Marka suuqaas loo abuuro waxaa hubaal ah in nolol ka wanaagan tii ay Qaadka iibineysay ay geli doonaan hooyooyinkaas.”
Inta uu ololahan socday ayaa waxaa jira machadyo cilmi baaris sameeya sida Heritage iyo cimi-baarayaal Soomaaliyeed oo madax bannaan ay ballan qaadaan in ay daraasad qotodheer ka diyaariyaan khasaaraha uu Qaadku ku hayo caafimaadka, dhaqaalaha, burburka qoysaska iyo nabadgelyada dalka Soomaaliya.
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed, xubno ka tirsan Barlamaanka Federaalka oo uu ugu horreeyo Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Wasiirro, Agaasimayaal iyo hawl-wadeenno dowladda ka tirsan, bulshada rayidka ah, bahda saxaafadda iyo haweenka Soomaaliyeed ee Gobolka Banaadir ayaa si isku mid ah usoo dhaweeyay ololahan looga hortagayo khatarta uu Qaadku ku hayo mujtamaca Soomalaiyeed. Ololaha Qaad Diid ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo uu abaabulo mooshin ka dhan ah Qaadka oo la horgeyn doono guddoonka Golaha Shacabka maadaama ay Xildhibaanada Soomaaliyeed mar walba sheegaan in ay matalaan bulshada Soomaaliyeed oo Qaadku uu ka naafeeyay dhinac walba.
Previous articleFAALLO: Daryeel Xumada Shaqaalaha Soomaaliyeed
Next articleBooqashada Taariikhiga Ah ee John Kerry uu Soomaaliya Ku Yimid